China 7050 SHEET ALUMINIUM orinasa sy mpanamboatra | Kaichuang
hateviny: 0.8mm ~ 150mm
tezitra: O, T6, T651
Ambainy: hatramin'ny 2200mm (OEM / ODM, tolotra serivisy omena)
Length: hatramin'ny 11000mm (OEM / ODM, tolotra serivisy natolotra)
mahavita: fikosoham-bary vita vita milina
Zinc no singa voalohany mampifangaro alloys aluminium 7050 andiany, ary ny fampidirana maneziôma amin'ny alloys misy 3% -75% ny zinc dia miteraka fifangaroan'ny allozy mihamafy. Ny vokatra mahatalanjona an'ny MgZn2 dia mahatonga ny effet fitsaboana hafanana an'io firaka io tsara lavitra noho ny an'ny firaka binary Al-Zn. Ampitomboy ny atin'ny zinc sy manezioma ao anaty firaka, ny hamafin'ny fihenan-tena dia tsy maintsy hatsaraina kokoa, fa ny fanoherana ny hamafin'ny fihenjanana sy ny fanoherana ny harafesina dia hihena noho ny taonany. Aorian'ny fitsaboana hafanana dia azo tanterahina ny toetra mampiavaka azy io. Kely-chromium varahina sy alloys hafa dia matetika ampiana amin'ity andiany ity. Ny firaka aliminioma 7050-T7451 no tsara indrindra amin'ny alimo aluminium amin'ity andiany ity ary heverina ho mahery indrindra. Vy malefaka. Ity firaka ity dia manana toetra mekanika tsara sy fanehoan-kevitra anodika. Ampiasaina indrindra amin'ny aerospace, fanodinana bobongolo, milina sy fitaovana, jig ary fitaovana, indrindra ho an'ny rafitry ny fiaramanidina sy ireo firafitry ny adin-tsaina avo lenta izay mitaky hery mahery sy fanoherana ny harafoana. Izy io dia ampiasaina indrindra amin'ny rafitry ny famokarana fiaramanidina sy ny firafitry ny adin-tsaina avo lenta izay mila tanjaka mahery sy fanoherana ny harafoana.
Ny ravina aliminioma 7050 dia ampiasaina indrindra amin'ny indostrian'ny aerospace, fa azo ampiasaina amin'ny rindranasa hafa izay ilana aluminium mahery.
Singa amin'ny firafitry ny fiaramanidina. Ho an'ny extrusion, hosoka maimaimpoana ary ho fananganana lovia mavesatra. Azo ampiasaina amin'ny karazana maty, fametahana, milina ary frame vita amin'ny alim-by avo.
Tsindrio aho raha mila fampahalalana momba ny orinasa sy fonosana
Previous: SARY ALUMINY 6082
Manaraka: TALATA ALUMINY 7075
Ravina aluminium 7050
mpamatsy takelaka aluminium
takelaka takelaka aluminium
vidin'ny metaly takelaka
China 6061 mpamatsy takelaka aluminium
Orinasa vita amin'ny takelaka vita amin'ny alim-baravaran'i Shina
Ambongadiny T6 aluminium Sheet
Mpamatsy vy vita amin'ny alim-bary vita amin'ny alim-bary, vidin'ny takelaka vita amin'ny takelaka aluminium, Takelaka aluminium mora vidy, Ravina aluminium 7050, firaka aluminium 6061 vidiny, Takelaka aluminium vita amin'ny takelaka,